Akụkọ - Nyocha banyere ọnọdụ ọnọdụ na mmepe nke ngwá ọrụ ịkpụ ígwè
Ngwá ọrụ ịkpụ bụ ihe eji egbutu igwe na-emepụta ihe. Ọtụtụ n'ime mma bụ igwe eji eme ihe, mana enwerekwa nke ejiri aka mee. Ebe ọ bụ na a na-eji ngwá ọrụ ndị e ji emepụta ígwè eme ihe n'ụzọ bụ́ isi iji gbutu ihe ndị e ji ígwè rụọ, a na-aghọtakarị okwu ahụ bụ́ “ngwaọrụ” dị ka ngwá ọrụ ịkpụ ígwè. Ọdịnihu mmepe nke ngwá ọrụ ịkpụ ígwè bụ imeziwanye arụmọrụ na ịdị mma nke igwe, belata ọnụ ahịa, ma belata usoro mmepe n'oge usoro nhazi. Ya mere, ọsọ na izi ezi nke ngwaọrụ n'ọdịnihu ga-abawanye. Otu ihe a na-achọkwa na-ebilite maka nkenke (ma ọ bụ ultra-nkenke) nke nwere ike ịrụ ezigbo chipping. ) Nkà na ụzụ na ngwá ọrụ nwere usoro nhazi ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe.
Site na nnukwu nnyefe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta ihe na China, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eme ka ọganihu nke mgbanwe nkà na ụzụ dịkwuo elu, ngwá ọrụ CNC nke ụlọ amalitela ịbanye n'ọhịa na-emepụta ihe na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
N'oge a, ngwá ọrụ carbide cemented ejiriwo ọnọdụ na-eduga n'ụdị ngwá ọrụ emepụtara, nke ruru 70%. Otú ọ dị, ngwá ọrụ ígwè dị elu na-ebelata na ọnụego 1% ruo 2% kwa afọ, na nkezi ugbu a dara n'okpuru 30%.
11-15 afọ nke ịcha ngwá ọrụ ụlọ ọrụ ahịa size na uto ọnụego
N'otu oge ahụ, ngwá ọrụ ịkpụ carbide cemented aghọwo ngwá ọrụ bụ isi nke ụlọ ọrụ nhazi na mba m chọrọ. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị arọ dị ka ụgbọ ala na mmepụta akụkụ, imepụta ebu, na ikuku. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ngwá ọrụ China nwere kpuru ìsì na oke mmepụta nke mma ígwè dị elu na-agba ọsọ na ụfọdụ mma ọkọlọtọ dị ala adịghị echebara saturation ahịa na mkpa nke ụlọ ọrụ. N'ikpeazụ, a na-enyefe ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ "n'etiti-na-elu-end-high-cure cut tool market" nwere uru agbakwunyere na teknụzụ dị elu.
Market saturation nke ịcha ngwá ọrụ ụlọ ọrụ na 2014-2015
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ nke China nwere ma ohere na ihe ịma aka, ma n'ozuzu, ihe ndị dị mma maka mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ na-anọ n'ọkwá kachasị elu. Ejikọtara ya na mmepe akụ na ụba n'ụlọ na ná mba ọzọ na mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China, ọchịchọ maka carbide cimented na mpaghara nke ịkpụ ngwá ọrụ nwere atụmanya dị mma.
Dị ka nyocha si kwuo, ọkwa nhazi nhazi na nkà na ụzụ ngwá ọrụ nke obodo m dị ihe dịka afọ 15-20 n'azụ mmepe ụlọ ọrụ dị elu. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụlọ ewepụtala ọtụtụ ahịrị mmepụta na ọkwa mba ụwa nke 1990s, ma ọnụ ọgụgụ ụlọ nke ngwá ọrụ eji eme ihe nwere ike iru ala dị ala nke 20%. Iji gbanwee ọnọdụ a, mba m ngwá ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị mee ngwangwa ijeụkwụ nke localization nke ibubata ngwá ọrụ, na ga-imelite ya azụmahịa nkà ihe ọmụma, si tumadi na-ere ngwá ọrụ ndị ọrụ na-enye ọrụ na zuru ezu tent nke ịkpụ technology iji dozie kpọmkwem nhazi nsogbu. . Dị ka ndị ọkachamara uru nke onwe ha ngwaahịa, ha ga-enwe nkà na kwekọrọ ekwekọ ọnwụ technology, na mgbe niile na-emepụta na ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa. Ụlọ ọrụ onye ọrụ kwesịrị ịbawanye ntinye nke ọnụ ahịa ngwá ọrụ, na-eji ngwá ọrụ eme ihe n'ụzọ zuru ezu iji melite arụmọrụ, belata ọnụ ahịa, belata Intranet/Extranet, ma nweta ogo dị ukwuu nke ihe onwunwe (dị ka ịcha nchekwa data).
Dị ka mkpa nke mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, multi-functional composite tools, ngwa ngwa ngwa ngwa na nke dị elu ga-abụ isi ihe na-emepụta ngwá ọrụ. N'ịbụ ndị na-eche ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ihe ndị siri ike na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ ngwá ọrụ ga-emeziwanye ihe ngwá ọrụ, ịmepụta ngwá ọrụ ọhụrụ na ihe ndị ọzọ nwere ezi uche.
1. Ngwa nke cemented carbide ihe na mkpuchi abawanyela. Ngwongwo nke ọma na ultra-mma-mma nke cemented carbide bụ ntụziaka mmepe; mkpuchi nano, mkpuchi ihe owuwu gradient na ihe mkpuchi ọhụrụ na mkpuchi ihe ga-eme ka arụmọrụ nke ngwaọrụ ịkpụ dị ukwuu; ngwa nke mkpuchi anụ ahụ (PVD) na-aga n'ihu na-abawanye.
2. Mmụba na ntinye nke ngwa ngwa ọhụrụ. Ihe siri ike nke ngwá ọrụ dị ka ceramik, cermets, silicon nitride ceramics, PCBN, PCD, wdg na-emewanyewanyewanye, na ngwa na-abawanye.
3. Mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ ịkpụ. Ịkpụcha ọsọ ọsọ, ịkpụ siri ike na nkụ na-aga n'ihu na-eto ngwa ngwa, na ngwa ngwa na-agbasa ngwa ngwa.
Nkọwapụta Cnc Machining China, Akụkụ omenala & eyi, Tungsten Carbide Vs Carbide, Carbide Punch ma nwụọ, Akụkụ Carbide Yiri, Dureza Del Titanio,